Jaajuus shisheeye miyaa loo dhiibayaa Villa Soomaaliya? - Awdinle Online
Jaajuus shisheeye miyaa loo dhiibayaa Villa Soomaaliya?
Xogtaan waxaa inala wadaagay ila katirsan urur gobolleed ka IGAD, oo qariyey magacooda, sababo Amni dartood.
Marka dal kasoo kabanayo bur-bur, hay’adihiisa ammaankuna aysan lahayn awood ku filan, dadkiisuna ay dalal shisheeye nolol bidaan, waxaa si fudud u dhacda in dalkaas siyaabo kala duwan loogu soo dhex dhuunto, weliba xafiisyada ugu sarreeya dalkaas ay qabtaan shaqsiyad midabka iyo muuqaalka daacad u eg, laakiin gudaha uga adeega dano shisheeye.
Waxaa jira tuhun weyn oo laga qabo ninka hadda haya xilka lataliyaha amniga qaranka ee Madaxweynaha Soomaaliya. Ninkaan waxaa lagu magacaaba Cabdi Saciid Muuse Cali, waxaa markii ugu horreysay Soomaalida ku jirta siyaasaddu baratay xiligii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf, markaas oo uu lataliye dhanka farsamada u ahaa madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf. Waa nin inta badan isku daya inuu u dhawaado madaxweynaha markaas talada haya, intii uu la shaqeynayey Madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf, wuxuu ku guuleystay inuu bannaanka soo dhigo qilaafkii ugu horreeyey ee Cabdullaahi Yuusuf iyo Ra’isul wasaarihiisi Cali Geeddi, dadkii ugu dhawaa waxey sheegaan inuuba isugu ahaa sababtii ay isku khilaafeen.
Dadka yaqaanna Cabdi Saciid waxey ku sifeeyaan inuu yahay nin inta badan ka ganacsada xogta, si uu xog u helana uu yahay nin ku dedaala inuu marka hore kasbado kalsoonida qofka uu ka rabo xogta, tusaale Madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf ayuu markii hore u seex-seexday, markii uu aaminay xogtii ugu horreeysay ee uu ku aaminay, wuxuu la wadaagay ra’iisul wasaare Cali Geeddi, isagoo uga sarriiftay safiir uu u bllaan qaaday, waana tan keentay khilaafka uu xilka ku waayi doono mudane Geeddi, markale wuxuu hoosta galay isla dowladdaas Shariif Xasan Shiikh Aadan, oo ahaa guddoonka baarlamaanka, wuxuuna ahaa fiiladii xogta u kala qaadi jirtay Shariif Xasan iyo Cabdullaahi, iyaguna waa kuwa is khilaafi doona.
Cabdi Saciid wuxuu leeyahay dhammaan dhaqanka iyo sifaadka jaajuusnimada, gaar ahaan weliba tan caalamiga ah (international Spy). Waa nin dhuumasho badan, isagoo hadda haya xilalka ugu sarreeya dowladda haddana lama arko, waa nin inta badan dhulka iska dhiga ilaa uu dantiisa ka gaarayo, waa nin isku hawla inuu u dhawaado hay’adaha uu xogta ka heli karo sida nabad sugidda iyo xafiiska ra’iisul wasaaraha, waa nin leh saaxiibo badan, oo isugu jira kuwo shisheeye iyo kuwo dalka u dhashay, haddana wuxuu isku dayaa inuu kala qariyo.
Wuxuu xiriir qarsoon laakiin laga dheehan karo safaradiisa, saaxiibadiisa iyo fursadahiisa shaqo u leeyahay dowladda Emirate ka, Ethopia, IGAD iyo wakiilka midowga Yurub ee geeska Africa. Xiriirka uu la leeyahay ururadaan iyo dowladahaan waxey ka muuqdaan ciddii u fiirsata safarada Cabdi Saciid iyo saaxiibadiisa ugu dhaw, tusaale Cabdi Saciid, markii uu ka tagay shaqadii la taliyenimo ee Cabdullaahi Yuusuf, kadib markii ay isku dheceen, wuxuu shaqo ka shaqeynayey xafiiska Midowga Yurub, markii lasoo doortay madaxweyne Shiikh Shariif, wuxuu markale isku dayey inuu usoo dhawaado, laakiin waa ay u suurtagali weysay, markaasna wuxuu la shaqo billaabay urur gobolleed ka IGAD, isagoo kala shaqeynayey xuduudaha badaha, weliba xilligaan uu IGAD kala shaqeynayey xududaha badaha waa markii Kenya iyo Soomaaliya gaareen heshiiskii is afgaradka ee ku saabsanaa badda, ee murunka badan dhalliyey, ugu dambeyna dacwada badda sababay.
Haddana markale markii lasoo doortay Madaxweyne Xasan Shiikh, wuxuu isku dayey inuu halkaas kasii wado hankiisii ahaa siduu uga mid noqon mar uun miiska go’aan gaarista Soomaaliya, markale ayuu halkaas ku hungoobay, isla markiina wuxuu shaqo la billaabay hay’adda Nordic international isagoo kala shaqeynayey mashruuca hormarinta Ethopia. Wuxuu markale dib ugu laabtay xafiiska midowga Yurub, halkaas oo ay ku kulmeen wasiirka qorsheynta Jamaal oo ka caawiyey inuu sifudud isku baro isaga iyo madaxweyne Farmaajo, uuna uga qaado xilka la taliyaha Amniga Qaranka. Cabdi Saciid hadda wuxuu dedaal ugu jiraa sidii uu ku noqon lahaa agaasimaha Villa Soomaaliya, taas oo ka dhigan in Cabdi Saciid Farmaajo ka heli doono, wixii u suurtagali waayey xukunkii seddex Madaxweyne
Cabdi Saciid, wuxuu ku fashilmay shaqadii xafiiska la taliyaha Amniga Qaranka..
A) Isagoo xogta amniga Qaranka la wadaaga wadamo aan rabin Soomaaliya oo yeelaya qorshe Amni oo ku filan.
Cabdi Saciid wuxuu ku fashilmay qorshihii (Natinoal Security Architecture) ee lagu soo saxiixay LONDON CONFERENCE ) isagoo horshihii fulinta si joogta ah ula wadaagi jiray hayado caalami ah oo ka shaqeeya amniga sida M5, M6, CIA iyo AFRICACOM.
C) Cabdi Saciid Wuxuu ku fashilmay inuu meel mariyo qorshihii (Transition Security Plan) ee loogu talo galay in masuuliyada amniga ay la wareegaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo ay kala wareegaan ciidamada AMISOM taas oo loo asteeyey inay dhacdo dhamaadkii 2019.
Maxaa wakhtigaan ku dhaliyey Cabdi Saciid inuu raadiyo Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada Qaranka?
A) Isagoo raba inuu helo dhaqdhaqaaq xagga siyaasadda ee xafiiska madaxweynaha maadaaba uu hada ka shaqeeyo oo kaliya arrimaha amniga si uu saaxiibadiis fursad ugu siiyo inay heli karaan macluumaad siyaasadeed oo leysku haleyn karo
Maadaama uu Agaasimuhu uu raaco safarada dibadda ee madaxweynaha waxaa u fududaan doonta inuu fariisto shirarka caalamiga ah iyo kuwa kali kalida ah ee madaxweynuhu la yeesho madaxda caalamka, taasna waxay u sahleysaa inuu fadhiyo shirarka inta badan si uu war bixin waafi ah ula wadaago saaxiibadiisa shisheeye.
C) Waxaa kaloo iyaduna meesha aan ka marneyn inuu rabo inuu saameyn weyn ku yeesho soo xulida baarlamaanka cusub ee soo bixi doona 2021, si uu ula wadaago saaxiibadiisa raba inay saaxiibo ku dhex yeeshaan xildhibaanada qaran si ay u fushadaan hadaf yadooda gurracan.
Ma madaxweyne Farmaajo ayey been ahayd inuu neceb yahay shisheeyaha iyo cidda u shaqeysa, mise shisheeye kalkaalka qaraabada ah kuma jiro?
Previous articleMa gafbaa mise toloow aqoon darra ayaa jirta?.
Next articleMohammed bin Salmaan oo xiray xubno ka mid ah Qoyska Boqortooyada